eSancharpati | » वास्तु शास्त्र अनुसार सुत्ने कोठा कस्तो हुनुपर्छ ? वास्तु शास्त्र अनुसार सुत्ने कोठा कस्तो हुनुपर्छ ? – eSancharpati
के के राख्नु हुँदैन पलङ मुनी ?
सुत्ने पलङमुनी गह्रौं बस्तु नराख्नुस् । यस्ले पलङ मुनी फोहोर मात्र गर्दैन । बास्तुको हिसावले तपाइँलाई तनाव पनि दिन्छ । त्यसैगरी धातुका सामग्री पनि सुत्ने पलङ मुनी राख्नु हुँदैन । खिया लाग्ने चिज सुत्नेस्थलमा हुनु घातक मानिन्छ । सुत्ने पलङमुनि फोहोर पनि राख्नु हुँदैन ।
पलङमुनी फोहोर हुनु पनि नराम्रो मानिन्छ । सुत्दा ओड्ने च्यादर वा सिरानी पनि फोहोर हुनु नराम्रो मानिन्छ । यदि सयन कक्षमा ढोका छ भने त्यसलाई बन्द नै गरेको राम्रो मानिन्छ । यी चिजहरुले अविवाहित ब्यक्तिको मनमा पनि विभिन्न नकारात्मक भावना आउने र गलत कार्य गर्ने खतरा रहेको बास्तु शास्त्रीहरुको दावी छ ।
विवाह पछि पनि यस्ता कुराले विभिन्न समस्या ल्याउन सक्छ । बास्तु शास्त्र सकारात्मक र नकारात्मक उर्जाको सिद्दान्तमा आधारित हुन्छ । नकारात्मक उर्जा हुने गरी सामानहरु राखियो भने मनमा तनाव हुने र शारीरिकरुपमा पनि असहजता पैदा हुने बताइन्छ । सकारात्मक उर्जाका लागि बास्तुमा ध्यान दिनु पर्छ । छोरा छोरीको विवाह भएन भने पनि पलङमुनि राखिएका बस्तु हटाउँदा उनीहरुको विवाह हुने सकारात्मक उर्जा प्राप्ति हुन्छ ।